फ्रान्सबाट आएका एक नेपालीमा देखियो कोरोनाभाइरस, सरकारद्वारा पुष्टि Canada Nepal
फ्रान्सबाट आएका एक नेपालीमा देखियो कोरोनाभाइरस, सरकारद्वारा पुष्टि
चैत्र १० २०७६
काठमाडौं । फ्रान्सबाट आएका एक नेपालीमा कोरोनाभाइरस देखिएको पुष्टि भएको छ । सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो ।
उनको अहिले उपचार भइरहेको छ । फ्रान्सबाट कतार हुँदै चैत ४ गते आएका उनी होम क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । उनलाई आइतबारदेखि अस्पतालमा राखेर उपचार सुरु गरेर उपचार भइरहेको छ । उनी विद्यार्थी र १९ वर्षकी रहेकाे स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए ।
ती नेपालीको आइतबार शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा परीक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएको पुष्टि भएको हो । हालसम्म ६०० मा नमुना परीक्षण गरिएको र सबैमा नेगेटिभ रिपोर्ट देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चैत्र १०, २०७६ सोमवार ०६:४७:०० बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - नेपालमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा निको हुनेको संख्या पनि बढीरहेको छ । हालसम्म नेपालमा ७३ दशमलव ७ प्रतिशत निको भइसकेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बुधबार आयोजित मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोरोना संक्रमणमुक्त भएका नेपालका ६ जिल्लाबारे जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मुस्ताङ, सोलुखुम्बु, रसुवा, डोल्पा, मुगु र हुम्ला कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् ।
त्यस्तै नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ११७२ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण भएको छ। जसमा पुरुष ७४६ र महिला ४२३ रहेका छन् । यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ६७८०४ पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा १८९३ जना डिस्चार्ज भएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या ४९,९५४ पुगेको छ । त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा ७ जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् । यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान जानेको संख्या ४३६ पुगेको छ ।
आश्विन ७, २०७७ बुधवार १८:०९:५४ बजे : प्रकाशित
# कोरोना संक्रमण मुक्त
काठमाडौं । सरकारले दशैं अगाडि नै लकडाउन गर्न सक्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लकडाउन गर्नेबारेमा गृहमन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दशैं आउन अझै एक महिना बाँकी रहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाभाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार भन्दा बढी भएमा लकडाउन गर्न गृहमन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बुधबार सक्रिय संक्रमितको संख्या १७ हजार ४१४ रहेको छ । यदी संख्या बढेर २५ हजार नाघेमा फेरि लकडाउन गर्न स्वास्थ्यले गृहमन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसबारे बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले फेरि लकडाउन लगाउनेबारेमा जानकारी दिएका हुन् । उनले भने, ‘संक्रमण बढिरहेकाले मापदण्ड पालन गराउन नसकिने सबै सेवा एक महिना नखोल्न सिफारिस गरिनेछ। कुनै दिन २५ हजार भन्दा बढि सक्रिय संक्रमित भएमा लकडाउन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।’
उनकाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुधवार बसेको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम (आइसीएस) को बैठकले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालन गर्न नसकिने सबै सेवालाई एक महिना नखोल्न सिफारिस गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
आश्विन ७, २०७७ बुधवार १७:२६:४६ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफ्नो विवादित अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् । मंगलबार प्राइम टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलालाई अन्तर्वार्ता दिनेक्रममा सल्लाहकार थापाले कुलमान घिसिङका कारण लोडसेडिङ अन्त्य भयो भन्नेहरु एकपाखे हुन् भनेका थिए । सो अभिव्यक्तिपछि उनी विवादमा परेका थिए ।
तर, उक्त अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले प्रष्टीकरण दिएका छन् । आफ्नो अभिव्यक्तिको गलत प्रचार गरेको आरोप लगाएका छन् । एकपाखातिरको कुरा गरेर अर्काेपट्टि बेखबर नै हुने असन्तुलित कुरा गर्नेलाई मैले एकपाखे भनेको जिकीर गरेका उनले भने, ‘त्यसलाई तोडमरोड गरी दुष्प्रचार गर्ने परिचालित तत्वहरूको भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दछु ।’
यसबारे सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्, ‘मैले “पाखे“ भनेको भनेर एकथरी दुराशय बोकेका व्यक्तिहरूले अति गरिरहेको पाएँ । एकपाखातिरको कुरा गरेर अर्काेपट्टि बेखबर नै हुने असन्तुलित कुरा गर्नेलाई मैले एकपाखे भएको स्पष्ट भनेको छु । त्यसलाई तोडमरोड गरी दुष्प्रचार गर्ने परिचालित तत्वहरूको भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दछु ।’
सो अन्तर्वार्तामा कुलमान घिसिङलाई भगवान भन्न थाले त जनताले भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले भने, ‘भगवान होइन त उहाँ मानिस हो । तपाइँ मानिस हो, म मानिस हो । हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू मानिस हो । कुलमानजी पनि मानिस हो । जनताले सडकमा उत्रिएर भगवान भने भनेर हामीले भगवान भन्छौँ त, भन्दैनौँ नि । मान्छे हो । हामी भगवानमाथि विश्वास गर्दैनौँ ।’
थापाको जवाफ सकिन नपाउँदै फेरि धमलाले प्रश्न गर्छन्, ‘हैन उहाँकै कारणले हाम्रो देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो । वहा वहा कुलमान घिसिङ भन्नेहरु छन् नि ?
यसको रुखो जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार थापाले भने– त्यसो भन्नेहरु एकपाखे हुन् । उहाँहरुको सन्तुलित विचार होइन। दृष्टिकोण होइन ।’ कुलमानका समर्थकलाई पाखेको भनिएको भन्दै बुधबार बिहानैदेखि प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार थापाको आलोचना भइरहेको छ ।
सो अन्तर्वार्तामा सल्लाहकार थापाले मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य हुनुमा कुलमानको भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका ठूलो रहेको जिकीर गरेका छन् । सो क्रममा कुलमानको पक्षमा भइरहेका सडक प्रदर्शनले कुलमानकै कद घटाएको उनको टिप्पणी छ ।
आश्विन ७, २०७७ बुधवार १७:०८:१६ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं । भारततको राज्यसभमा नेपाल–चीन सम्बन्ध र सम्झौताबारे सांसदले चासो देखाएका छन् । भारतको माथिल्लो सदनको रुपमा रहने राज्यसभामा नेपाल र चीनबीचको यातायात तथा पारवहन सम्झौतासँगै नेपाल–भारत सम्बन्धबारे पनि प्रश्न गरिएको छ ।
राज्यसभाको बैठकमा मध्यप्रदेशको ग्वालियरबाट राज्यसभामा निर्वाचित सांसद ज्योतिराधित्य सिन्धियाले नेपाल–चीन सम्झौताबारे चासो चासो देखाएका हुन् । उनले नेपाल–चीनबीच भएको पारवहन सन्धीबारे भारत सरकार जानकार भए नभएको तथा यसबारे नेपाल भारत सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्दै जिज्ञासा राखेका छन् ।
साथै यसबाट नेपाल भारत सम्बन्धका अनेकौं सम्झौताहरुलाई पार्न सक्ने प्रभावबारे पनि उनले जिज्ञासा राखेका छन् । उनको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा भारतीय विदेश राज्यमन्त्री भी मुरलीधरणले तेस्रो मुलुकसँग सम्झौता गर्ने नेपालको स्वतन्त्र निर्णय भएको बताए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको २०१९ अप्रिलको चीन भ्रमणका बेला चीनसँग पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिँदै राज्यमन्त्री मुरलीधरणले भने, ‘नेपालसँग भारतको युगौँ पुरानो सम्बन्ध विशिष्ट र विशेष छ जो साझा इतिहास, भूगोल,संस्कृति तथा जनस्तरको सम्बन्ध, आपसी सुरक्षा एवं निकट आर्थिक सम्बन्धमा आधारित छ ।’
राज्यमन्त्री मुरलीधरनले नेपालसँग भारतको सम्बन्ध आफ्नै हितमा आधारित रहेको तथा नेपालको तेस्रो मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध नेपालको स्वतन्त्र बिषय भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
सांसद सिन्धियाले केही वर्ष यता भारतसँगको निर्भरता बन्द गर्न नेपाल र चीनबीच भएका पारवहन तथा यातायात सन्धीहरुको विस्तृत विवरण मागेका छन् ।
यसैको जवाफ दिने गरी नेपालसँग सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन भारत प्रतिबद्ध रहेको भन्दै राज्यमन्त्री मुरलीधरणले भने, ‘भारत–नेपाल व्यापार, नेपाललाई आर्थिक र लगानी सहयोग, विकास सहायता, कनेक्टिभिटी, नेपालसँग संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्ध सुदृढ गर्न एवं विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहयोग पुर्‍याउन भारत प्रतिबद्ध छ ।’
नेपाल र चीनबीच यातायात र पारवहनसँग सम्बन्धित विषयमा सन्धी नभएर सम्झौता भएको थियो ।
आश्विन ७, २०७७ बुधवार १६:४५:४५ बजे : प्रकाशित
# पारवहन सम्झाैता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको अभिव्यक्ति विवादमा परेको छ । मंगलबार प्राइम टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलालाई अन्तर्वार्ता दिनेक्रममा सल्लाहकार थापाले प्रयोग गरेको शब्दावलीप्रति विरोध भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आएको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि पनि थापासहित अन्य सल्लाहकार पनि अभिव्यक्तिका कारण विवादमा पर्दै आएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्तिको माग राखेर भइरहेका प्रदर्शनसहितका विषयमा टिप्पणी गर्ने क्रममा थापाले प्रयोग गरेको शब्दप्रति विरोध भएको हो ।
कुलमान घिसिङलाई भगवान भन्न थाले त जनताले भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले भने, ‘भगवान होइन त उहाँ मानिस हो । तपाइँ मानिस हो, म मानिस हो । हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू मानिस हो । कुलमानजी पनि मानिस हो । जनताले सडकमा उत्रिएर भगवान भने भनेर हामीले भगवान भन्छौँ त, भन्दैनौँ नि । मान्छे हो । हामी भगवानमाथि विश्वास गर्दैनौँ ।’
थापाको जवाफ सकिन नपाउँदै फेरि धमलाले प्रश्न गर्छन्, ‘हैन उहाँकै कारणले हाम्रो देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो । वाहा–वाहा कुलमान घिसिङ भन्नेहरु छन् नि ?
आश्विन ७, २०७७ बुधवार १५:३५:२२ बजे : प्रकाशित
वीपी प्रतिष्ठानमा कोरोना संक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु
काठमाडौं । धरानमा कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट थप एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सिरहाको औरी–३ का ५० वर्षीय पुरुष रहेका छन् ।
उनको धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । उनलाई असोज ७ गते कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
कोरोना संक्रमण देखिएपछि उनलाई वीपीमा भर्ना गरिएको थियो । उनको कोरोना स.क्रमणबाट मृत्यु भएको बारे स्वास्थय मन्त्रालयले पुष्टि गर्न बाकीँ रहेको छ ।
आश्विन ७, २०७७ बुधवार १५:०२:३२ बजे : प्रकाशित